Fitaovana fanaka, milina famokarana milina, famonosana fantsom-bidy, mpaninjara ny lubrication, mpamokatra rafitra lubrication
Faritra aorian'ny fanohanana-varotra
Home[email voaaro]2019-11-09T04: 04: 27 + 00: 00
- Maninona no ilaina ny fitaovana fanosotra? -
Manampy grasa amin'ny alàlan'ny fitaovana famoahana molotra na rafi-pandrefesana eo anelanelan'ny lalambe roa manohitra miforitra, mba hamoronana sosona antikristy lubricant, hampihena ny fahombiazan'ny friction, hampihena ny famelezana, ny fampihenana ny fanjifana herinaratra. Ohatra, raha ny tsikera miorina amin'ny toaka tsara, ny kojakoja friction dia hihena, ary amin'izao fotoana izao miteraka fifandirana eo amin'ny sarimihetsika lubricating miompana amin'ny ankapobeny dia molekiola anatiny mihintsana miaraka amin'ny fanoherana lava be.
Mampihena ny fanatanjahan-tena eo anelanelan'ny fitaovana
Ny menaka na menaka eo anelanelan'ny sisin-tany dia mety hampihena ny akanjo adhesive, ny harerahana amin'ny vava, ny haingam-pandeha ary ny akanjo fiakanana. Raha nampidirina tamin'ny lubricant ny fitrandrahana, ny mpampikatroka dia nanakorontana ny korontana sy ny akanjo, na amin'ny mpandraharaha misy menaka, ny tsindry mavesatra, ny fanerena mahery vaika dia mety hampihena ny akanjo fametahana sy ny harerahana amin'ny tany.
Mampihena ny mari-pahaizana miasa
Ny lubricant dia mety hampihena ny «coefficient» «friction», ary mampihena ny hafanan’ny friction mihetsika, izay mety hampihena ny fiakaran'ny hafanana vokatry ny hafanana friction. Mampiasa fitaovana fanodinana, ny rafi-pandrefesana afovoany dia afaka manaisotra ny hafanana ateraky ny famoretana, amin'ny alàlan'ny hatsiaka ny temp. mba hifehezana ny fiasan'ny mekanika ao anatin'ilay mari-pana ilaina ilaina.
Tsy azo ihodivirana ary tsy azo ihodivirana ny fampitaovana haino aman-jery (toy ny rivotra, ny hamandoana, ny etona ny rano, ny rano manosika ary ny zava-mahadomelina, sns), ka ny fitrandrahana metaly dia harafesina, hihena ary fahasimbana aorian'izay. Indrindra ny atrikasa haavo avo toa ny zavamaniry metalyurgie sy ny zavamaniry simika dia vao mainka miharatsy sy mitafy.
Ny menaka manitra na menaka eo amin'ny metaly tsy misy korosiana, fa azon'izy ireo natao ny manasaraka amin'ny hamandoana rivotra maloto sy ny media manimba. Ny takela-metaly mila manao palitao miaraka amin'ny fanampian'ny menaka na menaka manohitra ny faharatsiana mba hisorohana ny fihenan-tany sy ny fipoahana.
Zava-baraingo vita amin'ny friction sy ny fampahalalam-baovao avy any ivelany dia haingam-pandeha haingana kokoa amin'ny haingon-trano, saingy azo alaina amin'ny rafitry ny menaka mihetsika mihetsika ny rano maloto, ary avy eo dia asiana sivana indray amin'ny alàlan'ny sivana. Ny menaka amin'ny menaka na solika dia afaka manaparitaka vovoka sy ny menaka rehetra ilaina, mba hitazomana ny motera.
Fanamafisam-peo fanamafisana, fanamafisana vaovao
Voaroaka amin'ny sakamalaho vita amin'ny sakamalaho, na dia kely aza ny hateviny, saingy afaka misintona fiantraikany amin'ny fihenan'ny sorona izy, ary mitana andraikitra amin'ny fanalefahana ny feo.
Ny motera mavesatra, compressor, maotera anaty anatiny misy piston, menaka mihosotra dia tsy vitan'ny mitana ny toeran'ny famoretana amin'ny lakanasa, fa koa manatsara ny fihenan'ny famehezana, tsy mandeha amin'ny fandidiana izany, manatsara ny fahombiazan'ny asa.
- Ny fitsipika lehibe momba ny rafitra fanosorana rano -
Ovaina ny menaka miovaova sy voaroaka ny fotoana, mora ny fikojakojana.
Right Fametrahana toerana
Fitaovana na singa mandrafitra dia tokony hapetraka ao amin'ny toeram-piasana mety amin'ny fangatahana grease.
Right Vokatra grika
Ny marim-pototra ny fihinana grease dia zava-dehibe ho an'ny rafi-pitaterana, tsy dia be loatra, vola fotsiny
Ny fisafidianana ny kalitao tsara amin'ny singa amin'ny lubrication tsy vitan'ny hoe manangona fotoana fotsiny fa ny vidin'ny fikolokoloana
Karazana fitaovana mety
Ny fisafidianana ny fitaovana fanosorana marina dia mahasoa amin'ny fiarovana ireo fitaovana sy rafitra fanosotra.
- Inona no atolotray momba ny fitaovana fanorana -
Lavom-bavony milelaka maintso:
Paompy elektrika famenosana herinaratra (Atondron'ny herinaratra, fanerena avo ary mahery)）
Paompy feno voatavo (Ento ny menaka, menaka hividianana fantsom-boto mahery vaika)
Pumps Grika (Entanina amin'ny torolalana na tongotra, fanerena ambany, portable）
Mpanome Distrika miandalana, Valves (Làlana iray, menaka, menaka avy amin'ny fizarana)
Mpanaparitaka andalana roa (Lalana roa, menaka, menaka mitsinjara)
Grika, rafi-pandrefesana solika (Ireo volavolan-tsolika fenoina ho an'ny fanodinana)
Vavahadim-pahamasinan'ny solika menaka (Valavina hifehezana ny làlana mikoriana na fanerena)
Rindran'ny fantsom-pifangaroan'ny rivotra (Lamba fangaro ny menaka sy ny rivotra, famonosana ny famafazana)
Ireo fambara amin'ny menaka fananganana menaka (Mampiseho ny taham-pivarotana grika, menaka solika na fanerena)
Sivana fitotoana menaka (Grease madio, menaka mba hialana amin'ny fahadiovana)
Mpanakalo hafanana-mpanondraka solika (Mampidina ny hafanana amin'ny menaka, menaka)
ENTANA NY FAMPISEHOANA NY FIKAMBANANA NY FIKAMBANANA
Lubrication Pump DDB10
Lubrication Pump DRB-P, DRBZ-P
Lubrication Pump DDRB-N, ZB
Lubrication Pump SRB-J (L), FB
- Tsy manahy momba ny tontolo iainana raha misafidy ny entantsika -
Jereo Vokatra Famaranana bebe kokoa
Fitaovana lubrication - Fangatahana atambatra:
Ny karazan-tsolika fanosotra fanodinam-bolo rehetra - Lubricate forklift mavesatra sy maivana - Rafitra fanamafisam-peo ho an'ny fantsom-bokatra vy - kodiarana mavesatra na fantsom-bozaka fanorana traktera - Lubricates fehikibo.
Rafitra famongorana any amin'ny sehatry ny indostria maro:
Masinina fitrandrahana harena an-kibon'ny tany- Masinina ala - Masinina fanamboarana - Masinina fanaovana fitrandrahana harena ankibon'ny tany - Masinina fitrandrahana - Masinina fambolena - Fitaovana fanodinana fako & fanodinana - Indostria fikirakirana fitaovana.
“Vokatra arak'izay ilaiko. Sombin-tsolika Shinoa lafo vidy, saingy mety amin'ny filako. ”
“Mitovy amin'ny tany am-boalohany amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny, mifanentana amin'ny faritry ny ozinina ihany. Hivoatra mandritra ny fotoana maharitra aorian'ny fampiasana azy. ”
“Tena nampiasainay ireo mpaninjara ireo ho solon'ny tetik'asa fanosorana anay. Nijery izahay ary mandeha tsara ireo ary tsara ny vidiny. Mety tsara sy miasa tsara izy ireo. ”
“Fa maninona no mandoa be lavitra noho ny vidiny lafo loatra? Mandeha tsara ireo… tsara kokoa. Mety tsara ireo ary tsy manana olana mihitsy. ”
Inona no lehibe kokoa, 18 na 19?